Rakkoo Baqattoota Oromoo keeniyaa keessatti -
bilisummaa June 8, 2015	Leave a comment
Mootummaan wayyaanee umurii angoo isaa dheereefachuf fedhii guddaa irrraa kan maddee walii hidhata siyaasa mootummoota olaa waliin qabu bayyee cimaa dha.
Ilmaan oromoo hidha,ajjeechaa,dararaa adda addaa dhala namaf hin malee mootummaa wayyaaneetin irraa gahaa jiru baqatani biyyaa olaa seenaan illee rakkoon biyyaa keessati isaan mudate kun biyyaa ambaa keessatis irraa hafuu hin dandeenye.
lammiiwwaan oromoo hedduun gaaga’ama biyyaa keessati isaan irraa gahaa jiru humnaa isaani ol ta’e Keeniyaati baqatan gabroomfatan harkaa isaa dheereefate akkuma baratteeti biyyaa nama keessatis dararuun,ukkaamsee gara dabarsun,gudeeduu fi ajjeesuu isaa itti fufee jira .
oromoota rokkoo kanaaf saaxilaman maqaa isaani Link as jalati maxxanfame kana jira laalu dandeesu.
Guyyaa tun hin nummaa dabarti akkanati hin haftu obsii yaa lammii koo!
Tags Baqattoota Oromoo Keeniya
Previous Intalti Oromoo takka biyya Su’udii magaalaa Riyaad keessatti benzinia ifitti naqun if ajjeefte
Next OROMOO KARRAYYUU KEESSAA WAA AS NUTTI BA’E!!!